Iyo WhatsApp app iri kuswedera pedyo nekusvika kuMac | Ndinobva ku mac
Isu tanga tichikumbira mukana wekushandisa WhatsApp paMac yedu kana iPad natively kwemakore mashoma uye mune iyi nyaya zvese zvinoratidza kuti zvave pedyo kuitika. Kwete kuti isu tine app yatove mubeta kana chimwe chinhu chakadaro, asi hongu vari kushanda pakuvandudzwa kwayo uyewo vanoratidza kubva WABetaInfo.
Ichi chishandiso chichava kiyi kune vazhinji vashandisi vanga vachishandisa WhatsApp kubva payakavambwa. Kune rimwe divi tinowana vashandisi vakati wandei vari kushandisa WhatsApp uye mamwe mameseji mameseji akadai seApple Messages kana Telegraph. Muzviitiko zviviri izvi zvemuno maapplication kune yega yega mudziyo iwo akakosha pakushandisa zvakanaka uye chiitiko chikuru.
Pane kutaura kweCatalyst-based app yeMac
Ehe, iyi Apple sisitimu haisi nyowani kana kungotangwa, saka tanga a Catalyst-based application Izvozvi hazvina kushata asi hazvifadze futi. Kune avo vasingazive, aya marudzi ekushandisa ishanduro dzeIOS dzinotakurwa kuMacOS nekukopa kodhi yavo.
Vangadai vakazviita kare. Izvi ndizvo zvichange zvichifungwa nevashandisi vazhinji izvozvi pakuverenga nhau uye ndiko kuti kutakura iyi app kuburikidza neCatalyst chinhu chingave chakadyiwa kwenguva yakareba. Parizvino vari mubudiriro saka tinofanira kuramba takamirira, zvisinei zvakanaka kuti vazopedzisira vazvitakura kuti vasaite. shandisa iyo desktop vhezheni iyo, kunyangwe ichishanda nemazvo, inogara iine mashoma sarudzo pane yemuno kana chaiyo application kune OS iri kushanda.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » apuro » Rumo » Iyo WhatsApp app iri kuswedera pedyo nekusvika kuMac
Frederick R. akadaro
Zvakanaka .. uye kwakabva? kana kuti kungofungidzira?
Mhinduro kuna Federico R.